Fidio ny anjara tsara – Tsodrano
Fidio ny anjara tsara
Tsy azo ialana fa sady manana ny toetran’i Marta isika no manana koa ny toetran’i Maria. Ny tsy mety dia ny hanenjanatsika betsaka ny toetra ny iray amin’izy mirahavavy. Mbola misy mantsy ao amin’ny Fiangonana olona izay mibahana tsy hanaovan’ny olona fikarakarana. Rehefa avy eo izy dia hihambo fa izy irery no nahavita ny asa. Ary dia misy sahy milaza hoe : « Dia tena jeren’ny olona fotsiny aho manao raharaha. » Nefa raha ny marina izy no tsy tian’ny hanaovan’ny olona. Raha ny hahafinaritra antsika izao dia ho tahaka izao no fandehan’ny tantara. Rehefa avy niteny tamin’i Jesosy I Marta dia I Maria no niteny hoe. « O ry Marta a ! mijanona kely aloha hianao dia avy mipetraka eto anilako hihaino an’i Jesosy iska. Tsy impiry handalo eto amitsika Izy, fa rehefa avy eo dia hiaraka hikarakara sakafo isika.
Tiava ny namanao tahaka ny tenanao